Chiremba Akaoma Mitezo Kubva muchiuno Anoita Kuvhiya MuStand Wiricheya
Chiremba Akaoma Mitezo Kubva muchiuno Anoita Kuvhiya Kutenda Kumira Wiricheya
Posted on December 9, 2013 November 20, 2020 by csr 1687
Mumwe anobudirira wekuvhiya weMissouri akarova zvisingaiti zvisingaite nekudzoka kuOOR mushure mekurwara kamwe kamwe kubva muchiuno zvichidzika.
Dr. Ted Rummel akarasikirwa neyake kugona kufamba kana kumira apo cyst yakazadzwa neropa pamusana wayo yakaputika muna 2010. Gore rekugadzirisa zvakanyanya mushure, aive adzoka mumutambo.
Rummel akatokunda chipingamupinyi chekugara apo aishanda nekushandisa njere yekumira-cheya cheya cheya.
Iye zvino, chiremba ane simba wemabhonzo anogona kuita zvese zvese muO OR iye aigona uye anochengeta yake simba remuviri ne kurovedza muviri zuva nezuva uye manzwiro ake simba Kutenda kumhuri yakazvipira zvakanyanya.
inoda kuti chiremba amire "src =" https://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/11/27/article-2513994-19AEC3FD00000578-217_634x448.jpg "width =" 634 "height =" 448 "/> Kusimudza: Dr. Ted Rummel anoonekwa achishanda kubva pakumira kwake-kumusoro wiricheya. Chigadzirwa chinomutendera kuti aite kuvhiya kwemauto, maitiro anoda kuti chiremba amire
Kufuridzira: Pano, Dr. Rummel anoonekwa pachigaro chake chakakosha. Gore mushure mekuremara, Rummel anga atodzoka muO. Asi chigaro chake chekugara chakamusiya asingakwanise kuita maitiro epafudzi, kuvhiya kwaanofarira
Paging Chiremba Rummel: Dr. Ted Rummel chiremba wemazino muMissouri uye anoita mashandiro ake pamajoini kubva wiricheya
Kugadzikana: Chiremba akatsunga akarasa kugona kwake kufamba apo cyst yakaputika musana wake. Gore rekuremerwa kwekugadzirisa gare gare, akange adzoka muOO achigadzirisa majoini nekuvandudza hupenyu
Rummel akaudza Mubvunzi kuti rusununguko rwake kunyangwe akaremara ave a kuponesa.
'Pandinenge ndichigona kuita izvi, uye ini ndikagona kutora chidimbu cheangu upenyu kudzoka, hombe, 'akadaro. 'Zvakanyanya kukosha.'
Asi chishamiso mhedzisiro yaisave chinhu chechokwadi nguva dzose.
Dambudziko rekuvhiya rakatanga muna2009 paakaonekwa aine cavernous hemangioma, mhando yesaga rakazara neropa, pamusana pake.
Vanachiremba vachitya kuti vanogona kumukonzeresa nekuoma mitezo vakasarudza kusavhiya.
Akagara necyst kwemwedzi gumi neimwe kusvika munaGunyana 11, apo bhegi rakaputika uye kuvhiyiwa kwakakodzera kwaakaitwa ipapo kwakamusiya achizara kubva muchiuno zvichidzika.
Pakarepo Rummel, uyo anoshanda muO'Fallon, Missouri, akazviwana ave kuenda kubva pakuvhiya chiuru pagore kusvika pakusaziva kana achazomboshanda zvekare.
Imwe yemafungiro angu ekutanga yaive, “Ah zvangu, ini zvangu upenyu sekuziva kwangu yakadzimwa, '' anoyeuka. 'Who you are out of the OR aenda uye unofanira kuzvinatsurudza iwe.'
Asi chiremba akazvitsaurira akakurumidza kupengenuka uye akafunga kuti achadzoka muO OR zvisinei nekuti chii chakatora.
Dr. Ted Rummel, chiremba wemabhonzo muO'Fallon, Missouri, akaremara kamwe kamwe muna 2010 apo cyst yakazara neropa yakaputika mumuzongoza wake
Gore rinonetesa rekudzoreredza gare gare uye Rummel aive adzoka kubasa achiona varwere uye vachiita mabvi, tsoka, makumbo uye gokora kuvhiya kubva kuchinyakare. wiricheya
'Chinhu chose chave nacho akaita ini zvirinani zvirinani nemhuri yangu, 'anodaro,' Chaingova chiitiko chakasimba kwazvo '
[btn link = "http://www.dailymail.co.uk/news/article-2513994/Paralyzed-doctor-performs-surgery-thanks-stand-wiricheya.html "color =" orange "target =" _ blank "] Verenga Nyaya Yakazara [/ btn]
Chengetedza Wiricheya yako neRurimi Kubaya
WestJet Santa Inobvunza Vatakuri Izvo Chavari Kuda KweKisimusi, Zvipo Pakusvika